BBC Somali - Warar - Amniga Saxafiyiinta Africa
Amniga Saxafiyiinta Africa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 September, 2012, 04:43 GMT 07:43 SGA
Guddoomiyaha guddiga midowga Africa Mr Jean Ping, ayaa sheegay in Africa ay horumar ka samaysay si xor ah u socodsiinta wararka iyo xoriyadda saxaafadda, isagoo sheegay in balse loo baahan yahay in wax badan lagu guulaysto mustaqbalka sida tababarka saxafiyiinta Africa.
Mr Jean Ping, ayaa ka hadlayay kulan uu la qaatay ergo saxafiyiin ah oo uu horkacayay guddoomiyaha ururka ay ku bahoobeen saxafiyiinta Africa.
Waxay ka wada hadlayeen amniga weriyayaasha iyo qodobka ku saabsan la xisaabtan la'aanta dadka xadgudubyada kula kaca saxafiyiinta.Jean Ping ayaa sheegay in uu rajaynaya in wax badan lagu guulaysan doono mustaqbalka hadii la diyaariyo hanti lagu tababaro weriyayaasha si wax looga qabto maamulka isgaarsiinta iyo wararka ee sida xooga leh isku badbadalaya.
Waxaa uu Dr Ping ku dhiirigaliyay weriyayaasha in ay kaalin ka qaataan horumarinta qaaradda iyagoo war tabintooda ka dhigaya mid ka maran ujeedoo gaar ah marka ay ka hadlayaa arrimaha kala duwan ee lagu hagaajinayo nolosha dadka African ah.
Sidoo kale kulan ay ka qaybgaleen hogaamiyayaasha saxaafadda, wakiilo ka socda dowladda Ethiopia, Qaramada midoobay, UNESCO iyo saraakiisha guddiga midga Africa ayaa ku shiray magaalada Addis Ababa, iyadoo ka hadlay siyaabaha horay loogu sii wadi karo ololaha ururka ay ku midoobeen saxafiyiinta Afirca ee FAJ uu ugu jira horumarinta amniga saxafiyiinta iyo soo afjaridda la xisaabtan la'aanta dambiyada lagula kaco warbaahinta.
Dr Jean Ping, ayaa tilmaamay in wali Africa ay ka jiraan ku xadgudubyo awoodeed, iyo takoorka saxaafadda wax baarta. Waxaana uu ballanqaaday in la sii wado taageerada amniga saxafiyiinta.
Guddoomiyaha Ururka Saxafiyiinta Africa ee FAJ, Cumar Faaruukh oo isaguna ka hadlay shirkan ayaa ka digay in saxafiyiinta Africa wali ay la kulmaan heer aad u sareeya oo gafaf loo gaysto iyo dhaqanka wax ka qabad la'aanta dambiga lagula kaco oo keena jawi cabsi ah ku hogaamiya in warbaahintu si xaad dhaaf ah isku ilaaliyaan.
Wuxuu ku baaqay in la sameeyo qorshe tallaabo Africa looga qaado si loogu guulaysto xal midaysan oo laga gaaro amniga weriyayaasha iyo sidii ay saxafiyiintu ugu shaqayn lahaayeen bii'ad amni ah.
Guddoomiyaha Ururka saxafiyiinta caalamiga ah ee IFJ, Jim Boumelha ayaa sheegay in ururka caalamiga uu ku howlanaa ilaa heer caalamiga ah in sare loo qaado wacyigalinta dhibaatada ka taagan amniga warbaahinta ee Africa iyo meel kasta oo aduunka ah, isagoo sheegay in ay dadaal ka sameeyeen hay'adaha caalamiga ah sida Qaramada Midoobay oo dhowaan ay la kulmeen golaha guud ee qaramada midoobay kuna dhiirigaliyeen in tallaabo adag la qaado si loo horumariyo saxaafadda.